ITIL လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး၏ carreer အလားအလာကိုဘာတွေလုပ်နေလဲ - ၎င်း၏ Tech မှကျောင်း
ITIL အောင်လက်မှတ်နှောင်းပိုင်းက၏အဖြစ်ကျွမ်းကျင်သူသင်တန်းများအကြားတွင်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားတက်ခူးခဲ့သည်။ ဒါဟာအဖြစ်မှန်စုပေါင်း 15 အကောင်းဆုံးယခုနှစ် 2014 အတွက်ဂြိုလ်ပေါ်အောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်လည်းပေးဆောင်ကြားတွင် ITIL ၏ဆွဲသွင်းပါဝင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးနောက်အခြေချနေထိုင်နေပါတယ်။ ITIL လက်မှတ်ရကျွမ်းကျင်သူများကကွဲပြားခြားနားသောကိုယ်စားလှယ်များသို့မဟုတ်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေသူများအပေါ်ထားတဲ့အစွန်းများအဘယ်ကြောင့်နောက်ကွယ်မှလှုံ့ဆော်မှု ITIL အုပ်ချုပ်ရေးအဆိုပါအိုင်တီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်ဆက်စပ်အသင်းအဖွဲ့များ၏ကျယ်ပြန့အတွက်လိုအပ်သည်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ Thusly, ITIL ကျွမ်းကျင်သူများကကြွယ်ဝစွာအတန်အသင့်ထိထိရောက်ရောက်မဆိုအိုင်တီအသင်းအဖွဲ့အတွက်အလုပ်အကိုင်အ paid ရှာပါ။
ITIL စနစ်၏တွေကမှားစရာအရည်အသွေးကိုလျစ်လျူရှုလိုက်ခြင်း, တောငျ့နောက်လိုက်ဒီသင်တန်းများ၏ရှေ့မှောက်၌အိပျသောအလုပ်အကိုင်အဖွင့်နှင့် ပတ်သက်. မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များတစ်ဦးကျိုးနွံစည်းရှိသည်။ ဒါကနည်းနည်းဆောင်းပါး peruser ITIL လက်မှတ်ရကျွမ်းကျင်သူများကများအတွက်အလုပ်အကိုင်အစျေးကွက်၏ပစ္စုပ္ပန်နေရာအရပ်ဆီသို့ဦးတည်အထွေထွေရှုမွငျခလီဆယ်ကူညီပေးပါမည်။
မှန်မှန်, ITIL စနစ်များ Service ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု၏လယ်ပြင်တွင်ချိတ်ဆက်နေကြသည်။ ITIL ကတိသစ္စာပြု၏အောင်မြင်ခြင်းပြီးနောက်ဆုံးများသောအားဖြင့်မျှော်လင့်ထားသည့်အစိတ်အပိုင်းများကိုဒါပေါ်ဆူပူမှု Analyst,, ပြောင်းလဲခြင်းညှိနှိုင်းရေးမှူးပြဿနာ Analyst, သူတို့ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ။
ဆော့ဝဲအင်ဂျင်နီယာအတွက် ITIL ၏တစိတ်တပိုင်း
ITIL လက်မှတ်ရပညာရှင်များအဘို့အအလုပ်ရှာဖွေရေး Prospect
ဆော့ဖျဝဲနှစ်ခုချုပ်ဒေသများတိုးတက်မှုနှင့် upkeep ဖြစ်ကြသည်။ software ကိုတိုးအကျိုးတူအုပ်ချုပ်ရေးအသုံးချဖို့နေဖြင့်ခွဲဝေအချိန်ခွဲတမ်းအတွင်းမှသစ်ကို applications များဆောက်လုပ်စီမံခန့်ခွဲနေစဉ်လျှောက်လွှာကိုလက်စသတ်နှင့်အပြေးသောအခါ, ဆော့ဖ်ဝဲထောက်ခံမှုအုပ်ချုပ်ရေးနှင့် upkeep ဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့စိုးရိမ်သည်။ ITIL software ကို upkeep ကစားရန်ကြောက်မက်ဘွယ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုရှိပါတယ်။
ဆော့ဖျဝဲ upkeep အတွက်မဆိုတစ်ဦးချင်းစီ, အိုင်တီထောက်ခံမှု, မူဘောင်သို့မဟုတ်အုပ်ချုပ်ရေးအနေနဲ့ ITIL အတည်ပြုချက်ကိုအတူတိုးမြှင်ကွပ်မျက်ကိုပြသပါလိမ့်မယ်။
ITIL အောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန် ITIL စမ်းသပ်မှုမှတဆင့်အောင်မြင်နိုင်ပါသည်ပြီးနောက်ယူပြီး။
ITIL Foundation က: ဤသည်ကတိသစ္စာပြုဒီတော့ထွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောစံချိန်စံညွှန်းများ, ပုံစံများ, စိတျအပိုငျး, စွမ်းရည်, အတွေးအခေါ်များ, အသုံးအနှုန်းများ၏အခြေခံသင်ယူမှုစမ်းသပ်နှင့်။
ITIL အလယ်အလတ်: ဤသည်စာမေးပွဲဖြေဆိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစုံစမ်းစစ်ဆေး၏လျှောက်ထား '' စွမ်းရည်ကိုတိုင်းတာ။
ITIL တဲ့ Expert: ဤသည်ကတိသစ္စာပြုသည့် ITIL စနစ်, သင်၏ကျွမ်းကျင်သူအလွ၏ဆိုလိုသည်မှာနိုင်စွမ်းထောက်ခံ။
ITIL မာစတာ: ဤသည် ITIL ကတိသစ္စာပြု၏အကြီးဆုံးသောငွေပမာဏသည်နှင့်ကမ္ဘာတစ်လျှောက်လုံးနေရာတိုင်းကနေပဲ 35 တစ်ဦးချင်းစီတဝိုက်ကဝယ်ယူနေသည်။
အဆိုပါကျူးကျော်စျေးကွက်စိုးရိမ်သောအတိုင်းအတာအထိ, ဒီမှာကြောင့်သင်သည်သင်၏ကျွမ်းကျင်သူများ၏မြင်ကွင်းတွင်ရှာဖွေ်၏အလုပ်အကိုင်တစ်ခုရေတွက်ဖြစ်ပါတယ် experience-
Beginner အဆင့်(အတှေ့အကွုံအနှစ်0မှ 7):
အစောပိုင်းက IBM Tivoli နှင့် BMC ကုစားဥပမာ, အိုင်တီအကျိုးအတွက်အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်တောင်းဆိုပေါ်မှာ။
အလယ်အလတ်အဆင့်(အတှေ့အကွုံ7နှစ်ပေါင်းထက်ပို):
: တူသောကိုပိုမိုအားကိုး, အုပ်ချုပ်ရေးအလုပ်အကိုင်
အိုင်တီဝန်ဆောင်မှု Delivery Manager ကို
ဇာတ်လမ်းတွဲအပိုင်းသို့မဟုတ်ပြဿနာ Manager ကို
အကျိုးကျေးဇူး Desk Manager ကို
သင်သည်သင်၏ကျွမ်းကျင်သူအခြေခံအုတ်မြစ်၏လွတ်လပ်သော, ITIL တက်သည်ကိုပြသအရည်အချင်းပြည့်မီနေကြပြီး, မလွန်စေခြင်းငှါနေချိန်မှာကြောင်း၏မှတ်ချက်ကို ယူ. အဖြစ်ဝေးသင်တစ်ဦးအိုင်တီအခြေခံအုတ်မြစ်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးသောချွတ်အခွင့်အလမ်းအပေါ်အလုပျအတှကျအဖွင့်အဖြစ်အများကြီးအလားအလာရှိပါတယ်မကျမည်အကြောင်း ။ ယူဆရင်, မည်သည့်အမှု၌, သင်သည်ဤသင်တို့အဘို့စံပြအသိအမှတ်ပြုဖြစ်ပါသည်, programming ကို upkeep နှင့်အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်အလုပ်အကိုင်ရှိပြီးမြောက်သို့မဟုတ်ယခုကဲ့သို့အရန်စီစဉ်ထားသည်။
ဆန်းသစ်နည်းပညာ Solutions (၎င်း၏သင်တန်း) ITIL အောင်လက်မှတ်သင်တန်းများ & စာမေးပွဲယူရန်သင့်အားကမ်းလှမ်းGurgaon အတွက် ITIL သင်တန်း